3 yeakanakisa eGitHub vatengi ekushandisa paLinux | Linux Vakapindwa muropa
3 yeakanakisa eGitHub vatengi ekushandisa paLinux
GitHub rave rimwe remapuratifomu akakurumbira ekushandira pamwe, umo isu tine mukana wekutora mapurojekiti uchishandisa iyo Git vhezheni yekudzora system inova hurongwa yakagadzirirwa naLinus Torvalds, Kufunga nezve kugona uye kuvimbika kweshanduro vhezheni yekuchengetedza kana maapplication aine huwandu hukuru hwekodhi kodhi mafaera.
Iye zvino GitHub inoonekwa senge pasocial network kune programmers kupi vanogona kugovana mapurojekiti avo nenharaunda uye nekukwanisa kugamuchira rutsigiro kana kuvandudzwa kwavo. Iyo kodhi yemapurojekiti akaitirwa paGitHub inowanzo chengetwa pachena, kunyangwe ichishandisa akabhadharwa account, iyo zvakare inobvumidza kuitisa yakavanzika zvinyorwa.
PaLinux isu tine nzvimbo yekubatanidza izvi kuburikidza nevatengi Izvo zvatine mabhenefiti makuru, nekuti kunyangwe isu tinogona kuzviita kubva kune iyo terminal sezvo Linux ichisanganisa iyo, zvinonyanya kusununguka kushandisa graphical interface.
Ndokusaka ino nguva ini ndichigovana newe 3 yeakanakisa maGitHub vatengi eLinux.
Gitg ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi application iyo inopa vashandisi veLinux nyore-kushandisa-kumberi-kumagumo, inotibvumidza kufamba neGitHub repositories.
Gitg yakanyatsogadzirirwa iyo Gnome desktop nharaunda, kunyange iine zvakare vhezheni yeMac.
Pakati pezvakakosha zveGitg tinogona kumira:
Izvo zvine yakavakwa mufaira muoni kuona nyore kodhi.
Gnome Shell desktop yekubatanidza iyo inobvumidza vashandisi kuti vatarise ichangosvikirwa Git repositori, nezvimwe.
Iyo yakavakirwa pane iyo Mac OS GitX chishandiso uye yayo ficha yakatarwa.
Iyo Gitg chirongwa chinoshanda pamwe chete neGitX yeMac kuita kuti chishandiso chienzane.
La basa rekutsvaga rinotendera kutsvaga nekukurumidza kwematavi uye zvinyorwa.
GitKraken ndeye yemahara uye yakawanda multiplatform mutengi kubva kuGit, haisi yakavhurwa sosi, kunyange iri zvakare ine yakabhadharwa vhezheni iko iko kushandiswa kuri kutengeserana uye nemidziyo hombe.
Iyo pro vhezheni yeGitKraken ine zvakawanda maficha, asi vazhinji vashandisi veLinux vanogona kushanda nemhando yemahara vhezheni sezvo iine akati wandei maficha.
Imwe ye zvinokwezva zvikuru zveGitKraken ndiyo dhizaini yemazuva ano. Yakachena uye yakapusa pameso, uye kune timu yakazvipira inowanikwa kubatsira vashandisi. Vagadziri vari kutsvaga chishandiso chiri nyore kubata Git zviri nyore vanofanirwa kufunga chishandiso ichi pamusoro pevamwe vese.
Pakati payo huru features tinogona kumira:
Tsigiro yemaitiro ese anoshanda main kuti timu yako yese ishandise
Nyore kushandisa uye kufamba.
Gitflow rutsigiro iyo Git graphical bazi chishandiso.
Git LFS kutsigira
Yakagadziriswa Engagement Chati
Tsigiro yeGit Hooks
Tsigiro yevakawanda maGit vanopa
Sub-module inobvumira nyore kubatana kwechikwata
Matimu mazhinji eUI anotendera mushandisi kugadzirisa GitKraken kune kwavo kufarira
Zviratidziro zvinoratidzirwa zveGit Repo chiitiko mumachati.
SmartGit mutengi akasununguka wepamuchinjikwa-chikuva GitSaGitKraken, ine maBhaibheri maviri, imwe yekushandisa pachako, ine vhezheni yakabhadharwa, "pro" yezvimwe zvikwata.
SmartGit iri inowirirana nevakawanda vanopa maGit, inosanganisirwa GitHub, BitBucket, anozvipa-wega maGit server, uye Atlassian stash. Pamusoro peizvi, SmartGit inogona zvakare kubata SVN uye Mercurial zvakanaka.
Dhizaini yechirongwa yakachena uye haina kuoma. Uyu weGit mutengi wakanakira kune vanogadzira avo vanokoshesa maficha pamusoro pezvinhu zvakatsetseka zveUI uye nemavara akanaka.
Pakati pe mainini Zvatinogona kuratidza kubva kumutengi uyu isu tinowana:
Tsigiro yevazhinji vanopa maGit, kusanganisira vanozvibata.
Tsigiro yeimwe nzira dzekudzora sosi kunze kweGit SVN neMercurial
GitFlow rutsigiro, iyo Git graphical bazi maneja.
Git hombe faira rekuchengetedza
Yakachena UI dhizaini
Zviri nyore kuenzanisa misiyano padivi nedivi
Yakabatanidzwa SSH mutengi yekukurumidza kubatana kubatana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » 3 yeakanakisa eGitHub vatengi ekushandisa paLinux
3 yeakanakisa Twitter vatengi ekushandisa paLinux
Maitiro ekuwedzera kana kubvisa ekutanga zvirongwa mune yedu Gnu / Linux kugovera